mardi, 19 septembre 2017 22:10
SECES: Voafidy indray hitantana ny sendika i Dr Ralambomanana Dimby
Dr Ralambomanana Dimby hatrany no lany ho filoha hitantana ny SECES, hiasa mandritra ny taom-piasana manaraka, izay haharitra telo taona. Izy no mbola nanankinan’ny mpizaika nandritra ny kongresy nasionalin’ny SECES teto Mahajanga, nifarana androany rehefa naharitra roa andro, ny 18 sy 19 septambra 2017.
Fehin-kevitra 3 lehibe no nivoitra tamin’izany. Teboka iray lehibe ny fanamafisana ny fitakiana mifanandrify amin'ny zo sy hasin'ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra. Voarakitra anatin'izany ny fanatanterahana ny tambikarama roa (résidence sy logement ) voafaritry ny didim-panjakana 2009-1214 tokony hihatra manomboka ny volana Janoary 2018. Eo ihany koa ny fampiharana ny didim-panjakana 2009-1215 ny amin'ny tambim-pikarohana ho an'ireo tokony hisitraka izany.
mardi, 19 septembre 2017 19:39
SECES: Manao Kongresy nasionaly aty Mahajanga
Eny amin'ny Campus Ambondrona no mikaondoha ireo mpampianatra mpikaroka mivondrona ao amin'ny SECES manerana an'i Mahajanga.
Mandritra ny roa andro izy ireo no manatanteraka ny kongresy, ny 18 sy 19 septambra 2017.
Hivoaka aorian'izao kongresy izao ny anaran'izay hitantana indray ny SECES mandritra ny telo taona manaraka indray, ary hijerena ny fomba hitondrana ny sendika.
Nanotrona ny fanokafana ny kongresy ny minisitry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa, ny profesora Rasoazananera Marie Monique.
Universiades: Mpianatry ny ambaratonga ambony 1200 no tonga aty Mahajanga
Fanatanjahantena ifaninanan'ireo mpianatra eny amin'ny ambaratonga ambony, avy amin'ireo oniversite sy ivon-toeram-pikarohana manerana an'i Madagasikara na Universiades, nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny 17 septambra ny andiany fahatelo teny amin'ny Campus Ambondrona.
Mpianatra maherin'ny 1200 no tonga aty Mahajanga mandray anjara amin'ny Universiades hisolo tena ny Faritany misy azy avy.
Hetsika ara-kolontsaina nandraisan'ny mpianatra avy amin'ny oniversiten'i Mahajanga anjara amin'ny maha mpampiantrano azy ireo no nanokafana ny hetsika.
Anisan'ny antoky ny fahombiazana amin'ny fianarana rantovina ny fananana vatana salama, ka izay no anisan'ny handrisihana ireo tanora mpianatra hazoto amin'ny fanaovana fanatanjahantena.
Ambatondrazaka: Tra-tehaka ireo mpangaro-paosy sy mpamaky trano efa ela nanaovan-dratsy
Hetsika manaraka hataon’ny Polisy ny fanenjehana ireo mpisoloky ato anatin’ny faritra Alaotra, araka ny nambaran’ny Kaomisera divizionera Rakotomavo Roger Henri.
mardi, 19 septembre 2017 11:45
Mahajanga: Zaza 09 taona, mikarama eny amin'ny Petite Plage
Ady ny fiainana, tsy vitan'olon-drery intsony ny famelomana ny ankohonana fa ifanakonan'ny mpianakavy.
Mahavariana sady maha ontsa ny mahita ireto ankizilahy kely ireto miketrika eny amin'ny Petite Plage Mahajanga. Iray amin'ireny i Gerlain, vao sivy taona monja dia efa mitety ireo mpitsangatsangana eny amin'ny torapasika manosotra tentina amin'ny tarehy. Miaraka amin'ny sary isafidianan'ny mpanjifa ny modely ahosotra aminy sy poketra kely misy ireo kojakoja ilaina amin'izany no ahitana azy mandehandeha eny.
500 hatramin'ny 1000 Ariary no manosotra tentina ary mahazo hatramin'ny 5000 Ariary Izy raha tena mandeha ny tsena. Mbola mpianatra kosa anefa izy ary isaky ny tsy mianatra sy nandritra ny fialan-tsasatra lehibe ihany izy no miasa.
mardi, 19 septembre 2017 11:00
IBIS Ankorondrano: SYMPOSIUM iraisam-pirenena ho an’ny fiarovana ireo zava-maniry
Notanerahina ny alatsinainy 18 septambra tetsy amin’ny IBIS Ankorondrano ny SYMPOSIUM iraisam-pirenena ho an’ny fiarovana ireo zava-maniry izay efa ho lany tamingana eto Madagasikara.
Maharitra dimy andro moa ity karazana hatrik’asa sy dinika ity izay eo amban’ny fiahian’ny FAO.